Ianaro ny fomba famadihana ny famerenana endrika Safari amin'ny macOS Monterey beta 3 | Avy amin'ny mac aho
Ianaro ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny famerenana endrika Safari amin'ny macOS Monterey beta 3
Raha iray amin'ireo manandrana ny rafitra fiasa ianao macOS Monterey tokony ho fantatrao fa mpampiasa maro no nitaraina momba ny fanavaozana ny Safari. Tsy zatra an'io izy ireo, saingy tokony ho fantatrao ihany koa fa azo atao ny mamadika an'io fizotra io ary miverina amin'ny fanamboarana alohan'ny an'ity beta Monterey vaovao ity. Ho hitantsika amin'ity lesona kely sy tsotra ity. Fa raha tsy te-hanala ireo fikirana Safari amin'ny maody Monterey ianao.
Miaraka amin'ny macOS Monterey beta 3, dia namerina nanamboatra ny bar an'ny tabilao Safari indray ny orinasa. Raha tsy tianao ny fijery azy dia azonao atao ny miverina amin'ny endrika teo aloha izay nisy tamin'ny kinova beta voalohany sy faharoa an'ny macOS Monterey. Ny endrika vaovao an'ny Safari dia miteraka adihevitra marobe amin'ny Internet. Raha miaraka amin'ny iOS 15 beta 3 dia somary misimisy kokoa ny fiovana, miaraka amin'ny macOS Monterey beta 3 Safari dia tena hafa indray ny fahitana azy. Midika izany fa betsaka ny olona tsy maniry an'io fomba vaovao io.
Miaraka amin'ny bara fisolo samy hafa dia hitantsika izao, ohatra, ny ankamaroan'ny mpihazakazakao. Na dia azo antoka avy amin'ny Apple aza ny famerenana ny bokotra reload, azo atao ihany koa ny miverina amin'ny endrika taloha, izay ahitàna ny tabilao rehetra toa mifangaro kokoa. Mba hamerenana ny famerenana endrika Safari amin'ny macOS Monterey beta 3, tsotra fotsiny araho ireto dingana tsotra ireto:
Amin'ny fisokafan'ny Safari dia misafidy izahay: «Jereo» eo amin'ny zoro ankavia ambony. Ankehitriny dia tsy maintsy atsahatra ny safidy "Asehoy ny bara fisarahana". Mora toy izao. Tsy misy zavatra hafa azo atao. Ankehitriny ny Safari dia toa ny kinova beta roa voalohany an'ny macOS Monterey, fa miaraka amin'ny fanampiana ny bokotra Reload indray.
Ny iray amin'ireo zavatra tsy haintsika amin'izao fotoana izao, farafaharatsiny farafaharatsiny dia ny macOS Monterey beta 3 mbola tsy manohana ny asa fanaraha-maso efa nandrasana hatry ny ela. Miaraka aminy isika dia afaka mivezivezy eo anelanelan'ny trackpad sy ny klavier eo anelanelan'ny Mac sy iPads.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Ianaro ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny famerenana endrika Safari amin'ny macOS Monterey beta 3
Mividiana Mac na iPad amin'ny oniversite ary alao Airpods sasany
Androany amin'ny fivoriana Apple dia ho hita ao amin'ny YouTube ihany koa